Silinder Hydraulika, Jack Hydraulika tsara indrindra, Brining Lining - Wei Run
Jack scissor fiara
Jack tavoahangy hydraulic
Fiatoana ho an'ny freins
Manome fitaovana avo lenta izahay
Varingarin'i Hydro Telescopic Hydraulika
Antsipirian'ny vokatra 1.Vilindropical hydraulic silinder dia antsoina koa hoe silinder hydraulic multi-dingana. Izy io dia misy varingarina piston roa na marobe, izay misy lohan-varingarina, barika varingarina, tanany, piston ary faritra hafa. Misy seranan-tsambo fidirana sy fivoahana a sy B amin'ny lafiny roa amin'ny barika varingarina. Rehefa miditra ao amin'ny port a ny menaka ary miverina avy amin'ny port B ny solika, ny piston dingana voalohany misy faritra mahomby lehibe kokoa no atosika, ary avy eo mihetsika ilay piston dingana faharoa kely kokoa. Satria ny tahan'ny fikorianan'ny ...
Loader Hydraul Cylinder
Product Detail 1. Izy io dia natao ho an'ny mpitrandraka lehibe sy salantsalany. Izy io dia mety amin'ny fepetra amin'ny tsindry faran'izay 350 kgf / cm ^ 2 ary ny maripanan'ny - 20 ℃ - 100 ℃ (ny faritry ny faritra mangatsiaka dia - 40 ℃ - 90 ℃). Endri-javatra lehibe 2.a. Ny habe kely, ny lanja maivana ary ny tanjaka avo: ny fisafidianana fitaovana, ny haitao fanodinana ary ny teknolojia fanamafisana ny vatan'ny varingarina sy ny tehina piston dia raisina araka ny tanjaka, ny famolavolana havizanana ary ny doka ...
Cylinder Hydraulika andiany HSG01-E
Product Detail HSG karazana injeniera hydraulic hydraulic dia varingarina tokana karazana piston tokana, izay manana ny toetran'ny rafitra tsotra, asa azo itokisana, fivoriambe mora azo ary fanamorana, fikojakojana mora, fitaovana buffer ary fomba fifandraisana isan-karazany. Ampiasaina indrindra amin'ny milina fananganana, fitaterana, fandefasana, milina fananganana, milina fitrandrahana ary indostria hafa. Fikarohana sy famolavolana 1.Ny orinasanay manana injeniera 6 manana 20 taona, 40 taona ...
Cylinder Hydraulika Excavator
Antsipiriany momba ny vokatra 1.Voara miverimberina karazana varingarina tokana karazana siny hydraulic ampiasaina ho toy ny miverina mihetsika mihetsika actuator amin'ny rafitra hydraulic excavator. Ny vovo-tsolika hydraulic series an'ny PC dia karazana vokatra vita amin'ny varingarina hydraulic fikarohana izay nohadihadiana manokana ary novokarin'ny Komatsu sy ny teknolojia Kayaba any Japon. Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny tsindry miasa mafy, ny fampisehoana azo antoka, ny fametrahana azy mora sy ny fanaparitahana, ny fikojakojana mora foana ary ny fitaovana buffer. Ny tombo-kase rehetra an'ity ...
Tombanana dia 1998, Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. Any amin'ny faritra fampandrosoana ny toekarena Liaocheng, faritanin'i Shandong, dia mahatratra 68956 metatra toradroa sy velarana fananganana 39860 metatra toradroa. Miisa 327 ny mpiasa, ao anatin'izany ny mpiasa matihanina sy teknika mihoatra ny 52. Ny totalin'ny fananana dia 83 tapitrisa yuan ary ny vola miditra amin'ny varotra isan-taona dia 200 tapitrisa USD. Ny varingarin-tsolika anay dia ampiasaina indrindra amin'ny loader, mpamily mpamily, sehatra fananganana, kamio fako, camion dump, trailer, harvester, ary milina fananganana maro. Afaka manao araka ny fitakianao sy ny sary.Ekeo OEM sy ODM.
Ny ampiasaina amin'ny varingarina hydraulic
Ny varingarina hydraulic amin'ny ankapobeny dia manondro ny varingarina hydraulic. Ny varingarina hydraulic dia karazana actuator hydraulic izay manova ny angovo hydraulic ho lasa angovo mekanika ary manao fihetsiketsehana mitambatra (na mihetsika swing). Tsotra ny firafiny ary azo antoka amin'ny asany. Rahoviana ...
Ahoana ny fomba hanamboarana varingarina hydraulic
Ny varingarina hydraulic, raha ny tena izy, dia ampahany tsy miova amin'ny fitaovana mekanika. Tokony mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanosehana, fikorotanana, toerana fametrahana ary ny haben'ny fametrahana ny fitaovana rehetra. Rafitra voafaritra manokana an'ny milina fananganana, ny fetra varingarina dia henjana tokoa. Taorian'ny d ...
Ahoana no hitazomana ny varingarin'ny hydraulic
Manaova asa tsara amin'ny fanadiovana, te-hanao asa tsara amin'ny fikojakojana ny varingarina hydraulic, avy eo dia tsy maintsy manao asa fanadiovana tsara izy io. Ity dia lafiny iray tena ilaina tokoa, ny varingarina hydraulic amin'ny fizotran'ny fampiasana maharitra dia hamokatra vovoka sy tasy be dia be, raha tsy diovina ara-potoana, ...
NO.30 Huanghe Road, Liaocheng Zone fampandrosoana ara-toekarena, Shandong, Sina